Inokurumidza kubva kuSuperstar "Vanilla Ice" uye Samsung: Ice, Mucheche! Sei kuponesa nyika?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Inokurumidza kubva Superstar "Vanilla Ice" uye Samsung: Ice, Mucheche! Sei kuponesa nyika?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Entertainment • nhau • vanhu • Kutarisirwa • USA Kuputsa Nhau
Inokurumidza kubva Superstar "Vanilla Ice" uye Samsung: Ice, Mucheche! Sei kuponesa nyika?
Vanilla Ice vanobatana neSamsung Electronics kuburitsa zvekare hit single 'Ice, Ice Baby' se 'Deredza Ice Rako, Ice Mucheche'
90s American rap superstar Vanilla Ice akabatana neSamsung Electronics kuburitsazve yake hit single 'Ice, Ice Baby' se 'Deredza Ice Rako, Ice Mwana', ichipa meseji ine simba "ine mutsindo wakasimba".
Iyo nyowani nyowani yemimhanzi vhidhiyo ine iyo rapper inokurudzira vateveri kuti vaite shanduko diki nemusiyano mukuru, vachidaidzira pasirese kuti iwedzere tembiricha yemafriji avo, nekudaro ichideredza yega yega kabhoni tsoka kuti iite wepasirese uye pamwe kusangana.
Dhata nyowani yakaburitswa kubva kuSamsung inoratidza kuti kana mhuri yega yega muEurope ikawedzera tembiricha yavo yefriji ne1 degree Celsius1, huwandu hunofungidzirwa hweanopfuura mamirioni miriyoni ematani emweya CO1 inogona kuchengetwa pagore 2.
Iyi ndiyo yakaenzana emhepo yeCO2 yakaburitswa kubva pamusoro pevanopfuura mazana maviri nemakumi maviri nenomwe emota dzevapfuuri dzinofambiswa kwegore rese, pamusoro pemamirioni mazana maviri nemazana maviri emamirioni akavharirwa nemavhareji emotokari yemutyairi kana kushandiswa kwesimba kwegore pamisha inopfuura 217,000 dzimba dzakabatanidzwa 2.5.
Samsung iri kupemberera kuvhurwa kwayo nyowani Bespoke Firiji fosi senge inoratidzirwa kumonyoroka muvhidhiyo ichangoburwa yemumhanzi. Iyo renji inouya mune sarudzo ye14 on-trend colourways muUK, kubva kune yakajeka pastels kusvika kune yakatsetseka monochromes, uye hwakawanda hwese hwekupedzisa senge Glam, Satin, Stainless Simbi uye Cotta.
Vanilla Ice akati: “Ndinoda kurarama hupenyu husingaperi uye kushandisa simba kwakabatana. Ini ndinogara ndichitsvaga akanyanya akacheka-dhizaini dhizaini eangu imba, uye ndinonyatsoda magadzirirwo eBespoke line-up ari. Ndiri kufara kwazvo kushanda neSamsung pachirongwa ichi sezvo mimhanzi iri nzira yakanaka yekubatanidza vanhu nekuparadzira iyi nyaya yezvakatipoteredza. Ndinovimba meseji yatambirwa zvine mutsindo uye zvakajeka, uye tese tinogona kuita napatinogona napo kuchengetedza nyika yedu. ”
Tim Beere, Senior Chikamu Anotungamira Kutonhora paSamsung Europe akati: “Tinofara kuve takabatana naVanilla Ice pachirongwa ichi kuparadzira meseji yekusimudzira yakakosha kwatiri. Yedu Bespoke renji yemodular mafriji yakagadzirirwa nekusimudzira uye kuvimbika mupfungwa, ichipa mudziyo unokwanisa kugara kupfuura mufashoni, uchiperekedza varidzi kwemakore kuburikidza nezvavanogara vachichinja zvavanoda, kuravira, chikafu chekushandisa, uye zvikamu zvekuvandudza hupenyu hwemhuri. Aya ma-taskmasters anoita zvepamusoro akagadzirwa-akagadzirwa, anochinjika mukushanda, uye anogara kwenguva refu. ”
Samsung nyowani Bespoke Refrigerator renji yakafungidzirwa kugadzirirwa kubatsira kudzikisira kukanganisa kwenzvimbo pamwe nemapaneru ayo anochinjika uye modular dhizaini inobvumira vashandisi kugadzirisa, pane kutsiva mafiriji avo nekufamba kwenguva. Shanyira samsung.com/vanilla-ice kune zvimwe i